Porteus Kiosk 5.2.0 yakatoburitswa uye ndiyo yekupedzisira vhezheni yekupa Flash rutsigiro | Linux Vakapindwa muropa
Kutanga kwe iyo nyowani vhezheni ye Porteus Kiosk 5.2.0 inova yazvino vhezheni yekugovera inosanganisira Flash rutsigiro, pamwe neRemina kuvaka zvakare, kugadzirisa, uye nezvimwe.
Kugovera kwacho kwakamira kuve mudziyo wekutanga uyo inosanganisira chete yakatemwa seti yezvinhu zvakakosha kumhanyisa webhu browser (Firefox uye Chrome zvinotsigirwa).
Izvo zvinoderedzwa mukukwanisa kwayo kudzivirira zviitiko zvisingadiwe pahurongwa (semuenzaniso, kushandura marongero hakubvumidzwe, kunyorera kurodha / kumisikidza kwakadzivirirwa, kungowana chete mapeji akasarudzwa).
Uyewo, yakasarudzika gore inovaka yakapihwa kushanda zvakanaka nemawebhu webhu (Google Apps, Jolicloud, OwnCloud, Dropbox) uye ThinClient kuti ushande semutete mutete (Citrix, RDP, NX, VNC uye SSH) uye sevha yekutungamira kwema kiosk network.
Kugadziriswa kunoitwa kuburikidza neakakosha wizard, iyo inosanganiswa neiyo inosimudza uye inokutendera iwe kuti ugadzirire yakasarudzika vhezheni yekugovera kit yekuisa pane USB Flash kana hard disk.
Semuenzaniso, unogona kuseta peji rekumisikidza, kutsanangura whitelist yenzvimbo dzinotenderwa, kuseta password yekupinda muenzi, tsanangura kusaita nguva yekuvhara kubuda, chinja iyo yekumberi mufananidzo, pakati pezvimwe zvinhu.
Pakutanga, zvigadzirwa zvemukati zvinosimbiswa uchishandisa macheki uye iyo system mufananidzo yakaiswa mune yekuverenga-chete maitiro.
1 Zvinyorwa zvitsva zvePorteus Kiosk 5.2.0
2 Dhawunirodha Porteus Kiosk 5.1.0
Zvinyorwa zvitsva zvePorteus Kiosk 5.2.0
Iyi vhezheni itsva yePorteus Kiosk 5.2 yakaziviswa se yazvino vhezheni ine kugona kushandisa Adoble FlashPlayer, mune ramangwana pachave neshanduro dzebrowser dzisina rutsigiro rweFlash plugin.
Nezve software software tinowana kuti ndizvo inobvumirana neGentoo repository kubva munaKurume 14, kusanganisira akagadziridzwa mapakeji ane kernel Linux 5.10.25, Chrome 87 uye Firefox 78.8.0 ESR.
Iyo iri kure desktop desktop ye Remmina yakavakwazve nerutsigiro rweCUPS yekudhinda server kupa kugona kuendesa zvakare maprinta emuno kumasisitimu ari kure kuburikidza nesangano reRDP.
Kunze kwezvo, izvo ndizvo akaremara kugona kufambisa zvinongedzo kune mabhukumaki bar uye bhatani repamba (zvirimo mubhawa uye peji rekumba zvinotsanangurwa chete kuburikidza neiyo faira yekumisikidza) uye zvakare zvinorambidzwa kudhonza iyo URL kune iyo tab bar kuti ugadzire iyo nyowani tebhu.
Iyo "libva-intel-media-driver" package yakawedzerwa pamwe nekuitwa kweVA-API (Vhidhiyo Yekuwedzera API), iyo inopa kubatana kubatana kune Hardware yekumhanyisa nzira dzevhidhiyo encoding uye kududzira.
Izvo zvinotaurwa zvakare mukuzivisa kuti Shift + F9 uye Shift + F12 mubatanidzwa wakavharwa, iyo inopa mukana wekutora vault modes uye zvivakwa zvevanhu vakaremara.
Chekupedzisira, zvinotaurwa kuti nekumisikidza, kugovera kwacho hakupe mukana wekumisikidza zvigadziriso zveinoshanda system zvikamu uye software inosanganisirwa muInternet kiosk solution.
Kambani yePoland Porteus Solution, iyo inosimudzira uye inochengetedza iyo Porteus Kiosk kugovera, inotengesa sevhisi iyi pamwe nerutsigiro uye kugadzirwa kwemifananidzo yakagadziriswa ichitarisa zvinodiwa nemutengi (kusanganisira iyo brand). Mutengo unoenderana nenhamba yekuisirwa.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo Nezve iyi vhezheni vhezheni yakaburitswa, unogona kutarisa rondedzero yeshanduko uye webhusaiti webhusaiti.
Dhawunirodha Porteus Kiosk 5.1.0
Kune avo vari vanofarira kugona kuyedza kugovera uku, ivo vanozokwanisa kuwana mufananidzo weiyo system kubva kune yayo yepamutemo webhusaiti uko zvinowirirana zvinongedzo zvinopihwa mune yayo yekurodha chikamu (iyo bhuti mufananidzo wekugovera unotora 110 MB).
Saizvozvo, iwe unogona kuwana rumwe ruzivo pane saiti nezve kumisikidza, kumisikidza uye kunyangwe ruzivo kuti uchinje iyo system mufananidzo, mune yayo zvinyorwa zvinyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Porteus Kiosk 5.2.0 yakatoburitswa uye ndiyo yekupedzisira vhezheni yekupa Flash rutsigiro
Mautic pane yako server. Yako yekutengesa otomatiki mhinduro